Biju Subedi — Tue, 09/03/2019 - 09:06
उदासिन (डिप्रेसन) हुनेले यी कुराहरू जानेमा विना औषधि निको हुन्छ ।
मैले थुप्रै उदासिन डिप्रसनग्रस्त व्यत्तिहरुलाई यी कुराहरु बुझाएर निको तुल्याएको छु । यी कुरा मैले त्यसै भनेको होइन । हाम्रो समाज त्यत्ति त शिक्षित छैन तर श्क्षिित भनाउँदा समाज पनि आफुले पढेका कुरा लागु गर्दैनन् अनि पढाइ त्यसै खेर गइरहेको छ । हरेक व्यक्ति जसलाई पनि हतोत्साही बनाउन तलिल्न छन् । त्यसैले गर्दा शिक्षाको उज्यालो नपुगेका ठाउँमा डिप्रेसन, उदासिपन आज धेरै मात्रामा ब्याप्त छ र कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका छन् ।
मझेरीका गजलको लघु समीक्षा
HomSuvedi — Fri, 08/30/2019 - 10:54
आजसम्म लगाएर मैले मझेरीका ३४५ पृष्ठका कमसे कम पाँच हजार जति गजल पढें । गजल निकै मार्मिक र ओजले भरिएका रहेछन् । प्रसिद्ध गलकारहरू र मोतीराम भीमनिधि तिवारीका गजलसमेत रहेछन् । बढीमा २५०० जति पाठकले पढेका र घटीमा दस बिसले मात्र पढेका पनि देखिए । राम्रो गजलका पाठक धेरै र कमजोरका पाठक कम नै देखिए । यसैले पाठकले राम्रो रचनाको अध्ययन गर्दो रहेछ भन्ने सिद्ध भयो ।
HomSuvedi — Mon, 08/19/2019 - 11:12
कतार बसें दुबै बसें नेपाल बस्न सकिएन
बन्दुक बोकी भाइ मार्न जङ्गल पस्न सकिएन ।।
खानै पर्यो लाउनै पर्यो परिवार पाल्नै पर्यो
छाती माथि यसै तिखो छुरा धस्न सकिएन ।।
रात दिन घरबार धान्न धौ धौ हुँदा पनि
कसैलाई सामन्तीले जस्तो डस्न सकिएन ।।
आफ्नो ठाउँ आप्नो गाउँ किन किन प्यारो लाग्छ
अमेरिका छिर्ने सोखले कुम्लो कस्न सकिएन ।।
बेइमानीको कौडो पनि खाइएन जिन्दगीमा
इमान्दारी बेची बेची तल खस्न सकिएन ।।
के गर्नु र व्यवहार चलाउनै पर्दो रैछ
थाप्ला भरि सेतो विभुत घस्न सकिएन ।।
Biju Subedi — Thu, 08/15/2019 - 17:01
Biju Subedi — Sat, 08/10/2019 - 12:51
कस्तो छ तिमीलाई ?
ठी कै छ ।
भात खायौ ?
के मलाई भाते ठानेको ? कोही कसैको पनि खास हुनु हुन्न ? त्यसैले म भातको दास बनिन र बन्न पनि चाहन्न ।
केही चित्त नबुझेका कुराहरु होलान् नि ?
editor — Fri, 08/09/2019 - 18:10
नेपाली विश्व साइकलयात्री पुष्कर शाहले विश्व घुमेपछिको एउटा अन्तर्वार्तामा गौरवपूर्ण रोवसाथ भने –‘यो संसार यति विशाल र ज्ञानैज्ञानले भरिएको छ कि यसको अध्ययन गर्न एउटा जीवन त के सैँयौं मानव जीवन पाउँदा सक्षम सक्षम छैन ।’ उनको भनाइ वास्तवमा साँचो हो किनकि उनले आफ्नो ऊर्जाशील एघार वर्ष उमेर संसार घुम्न जो लगाए । घुम्नु सम्पत्ति हो । उनले संसार अवलोकनबाट प्राप्त ज्ञानलाई पुस्तकमा समेत रूपान्तरण गरे –‘संसारलाई साढे पाँच फन्को’ । उनैको किताबमार्फत् मैले विश्व सएर गरेँ । दुईतीनपटक पढिसक्दा अँझै धित मरेको छैन । लामो बिदामा म पुष्करको किताब सुम्सुम्याउन थालिहाल्छु । घुम्न नसक्नेका लागि अहिलेको जमानामा पुस्तक र डिजिटल मिडिया विश्व शयरका मित्रवत् सँगी बन्न सक्छन् । यो मेरो निजी विचार हो ।
कविता लेख्न अब हापिन्छ
HomSuvedi — Fri, 08/09/2019 - 17:40
भाषा कला हो म कला सजाऊँ
सजाउने गीत सधैं म गाऊँ
जस्ले पुनर्जीवन दिन्छ त्यस्मा
त्यस्तो कलाकार बनेर आऊँ ।।
हुन्थ्यो ममा भित्र नितान्त यस्तो
समुद्र उर्लेछ कि भन्नु जस्तो
लाग्दैछ यस्तो अहिले मलाई
मानौं सबै स्रोत सुकेछ जस्तो ।।
HomSuvedi — Tue, 07/30/2019 - 11:38
आतङ्क बेइमानी यो संविधानमा छन्
संस्कारका अनेकौं ठेली चिहानमा छन् ।
तिर्खा छ भोग गर्ने उन्मत्त छन् हजारौं
हाम्रा दिदी र बैनी सर्वत्र घानमा छन् ।।
धारा दफाहरुमा भिन्नै छ लेखिएको
भित्री अदृश्य धारा यस्का विधानमा छन् ।।
सत्रौं हजार मार्दै ल्यायौं विधान किन्तु
सर्वत्र देश चुस्ने यस्कै मुहानमा छन् ।।
खोज्दै विधान जस्ले सर्वस्व नै गुमायो
त्यस्ता सिपाही आफ्ना थोत्रे मतानमा छन् ।।
उत्सर्ग जिन्दगानी गर्ने छ भोक भोकै
छट्टू रजाइँ गर्दै यो देश खानमा छन् ।।
ज्यामी मिली हजारौं दर्बार जो बनाए
त्यस्ता हजार ज्यामी त्यस्कै रछानमा छन् ।।
बहर बहारको अभ्यास
HomSuvedi — Sun, 07/07/2019 - 13:22
दिमाग छन् शून्य छ शून्य सोच
आस्था न हुन्छन् न त हुन्छ ओज
प्रशस्त पैसा सँगमा हुनाले
नेतो बनेको छ टुनामुनाले ।।
लुछाचुँडीमा दिन रात फाले
आफू र आफ्नै जति मात्र पाले
र भ्रष्टको झुन्ड सबै उचाले
नेता भएका किन बाइफाले ।।
HomSuvedi — Thu, 06/20/2019 - 19:22
भाइ कैले पूरा गर्लास् गन्न तेरै बाँकी रह्यो
आफ्नो भन्न कैलै पाउलास् भन्न मेरै बाँकी भयो ।।
छोरा छोरी नातिसम्म मेरा केही छैनन् बाँकी
तेरो भने उपध्याहा यौटा धन्न बाँकी रह्यो ।।
त्यसले तँलाई सुख शान्ति केही पनि दिने छैन
भनौं भन्थे तेरा कानमा यसै भन्न बाँकी रह्यो ।।
जस्मा हुन् रमणीय भाव
HomSuvedi — Sun, 06/16/2019 - 14:56
जस्मा हुन् रमणीय भाव किन त्यो लेख्तैन यो लेखनी
अग्ला शैल हिमालको मधुरिमा देख्तैन यो लेखनी
ठानून् पाठकले पढेर यसमा "पाइन्छ सञ्जीवनी"
मात्रै वर्णनका कुरा फगतमा ओकल्छ त्यो लेखनी ।।
हामीमा अब छैन लेखन कला सामर्थ्य लेख्ने गयो
जस्तो लेख्न सक्यौं छँदैछ अहिले त्यो जे भयो जे भयो
आागामी दिनका अदम्य झरिला स्रष्टाहरू चम्कन
लागून् सिर्जनमा निरन्तर उचा आकाशलाई छुन ।।
HomSuvedi — Thu, 06/13/2019 - 12:18
न मा पनि चन्द्रबिन्दु ???
भाषिक सन्दर्भमा ङ ञ ण न म जस्ता यी नासिक्य वर्णहरुले प्रयोग हुनु पर्दा कुनै स्थानमा सामान्य नासिक्य भएर काम गर्दछन् र कुनै स्थानमा असामान्य वा बढी नासिक्य भएर काम गरिरहनु पर्छ । कतै भने कम नासिक्य भएर पनि आर्थी संरचनाको भार यिनले बहन गरेका हुन्छन् । ण र ञ वर्ण तत्समबाहेकका नेपाली शब्दहरुमा उच्चारणमा छैनन् तर ङ न म भने छन् र यिनमध्ये केहीले सामान्य कम नासिक्य, सामान्य नासिक्य र अधिक नासिक्य भएर पनि शब्दमा अर्थ भेद गरेका छन् । शब्दमा अर्थभेद गर्ने क्षमता देखियो भने तिनलाई वर्णको हैसियत प्राप्त हुन्छ ।
HomSuvedi — Sun, 06/02/2019 - 21:44
भ्रष्टलाई किन किन बोल्नै सारो छ
बोले पनि मनको कुरा खोल्नै गारो छ ।।
खिरै पनि उसका लागि फाल्ने कुरा भो
हाम्रा लागि ढिंडो रोटो मात्रै चारो छ ।।
स्वास्थ्य रक्षा गर्नलाई भासन दिँदैछन्
त्यसलाई नाश गर्ने तिनकै धुलो छारो छ ।।
विना पानी हाम्रो जीवन कहाँ चल्ला र
पानी हैन हावा मात्रै आउने धारो छ ।।
अरूतिर विकासले अघाइसकेछन्
विकासमा ता हाम्रो गाई अझै थारो छ ।।